Hoos udhaca Dhagaha
Jilaac & Bangle
Iibiyaasha Ugu Fiican
Geeddi-socodka & Dhoofinta
Dalxiiska & Bandhigga Warshad
MAXAAD KA MID YIHIIN danymia JEWELRY
Warshadda Yiwu danymia Jewelry, waxay ku takhasustay soo-saarka, sameynta iyo qaabeynta dhammaan noocyada luqadaha moodada, hilqado, dugaagado, hilqado iyo noocyo kale oo dahab ah. Waxaan nahay mid ka mid ah soosaarayaasha dahabka ee ugu sarreeya oo si toos ah ugu iibiya jumlaleyda iyo tafaariiqda adduunka, oo aan diiradda saarno hal abuurka ...
Kala soocidda qurxinta
1. Dharka madaxa: inta badan waxaa loola jeedaa qurxinta loo isticmaalo timaha iyo dhegaha, sanka iyo qaybaha kale. Gaarka ah ayaa loo qaybin karaa: (1) waxyaabaha timaha lagu daro, oo ay ku jiraan timaha timaha, timaha, shanlooyinka timaha, timaha timaha, timaha, timaha garka, xirmooyinka timaha, iwm., Sida irbadaha irbadaha, alwaaxyada birta ah, timaha dheeman dheemanka ...
WAA MAXAY KHATARKA NECKLACE kuugu habboon yahay
Dahabku waa midabbo leh, oo lagu gashado dadka midabyo kala duwan leh oo maqaarka ka mid ah, waxaa jiri doona saameyn kala duwan oo muuqaal ah, qurux, ciil, madax adag, foolxun, taas oo ah natiijada midabaynta midabbada dahabka. Kuwa leh midabka maqaarka midabka casaanka leh, waxaad dooran kartaa dahabka quruxda badan, sida dahabka gadhka midabaynta leh, imi ...
Daryeelidda waxyaalaha la isku qurxiyo ee kuu habboon
1.Isku qurxin meelaha ka adag dushooda, kuuskuusyada iyo xoqidda waxay sababi doonaan in lakabka lakabka si dhaqso leh u xirto. 2. Si tartiib ah ugu tirtir dahabkaaga maro qoyan oo qoyan. Waxay kaa caawin kartaa in meesha laga saaro wasakhda dusha sare ah isla markaana xidha lakabka lakabka leh. 3. Si tartiib tartiib ah ugu xoq dahabka jaakad aan duugnayn
cinwaanka NO.90 ， Chunhan South Road ， Wadada Beiyuan, Yiwu, Shiinaha